Manjaro Linux 20.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.8, fanavaozana pacman ary bebe kokoa | Avy amin'ny Linux
Manjaro Linux 20.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.8, fanavaozana ny tontolo iainana ary maro hafa
Ny fanombohana ny ny fanavaozana vaovao ny sary apetraka amin'ny fizarana Linux "Manjaro Linux 20.1", araky ny fahafantaran'ny maro amin'ireo mpampiasa anao, Manjaro dia fizarana Arch Linux miorina ary mamoaka azy io (tsy misy kinova vaovao, fanavaozana ihany).
Izany no antony tanjon'ireto fanavaozana ireto dia ny hisorohana ireo mpampiasa vaovao sy ireo izay mametraka indray ny rafitra tsy tokony hisintona fanavaozana GB be dia be avy amin'ny fonosana rafitra.
Misongadina noho ny fisian'ny fizotran'ny fametrahana tsotsotra ny layout ary mora ampiasaina, manohana ny famaritana automatique ny fitaovana sy ny fametrahana ireo mpamily ilaina amin'ny asany.
Mitantana fitahirizana, Manjaro dia mampiasa ny toolkit BoxIt azy manokana, natao mitovy amin'ny Git. Ny tahiry dia tohanan'ny tohiny, fa ny kinova vaovao kosa dia mandalo dingana fanamafisana fanampiny.
Ho fanampin'ny repository azy manokana, misy ny fanohanana amin'ny fampiasana ny tahiry AUR (Arch User Repository). Ny fizarana dia miaraka amin'ny installer graphique sy interface graphique hanamboarana ny rafitra.
1 Inona no vaovao ao amin'ny Manjaro Linux 20.1
2 Sintomy ny Manjaro Linux 20.1
Inona no vaovao ao amin'ny Manjaro Linux 20.1
Ity fanavaozana ny sary vaovao ity dia ahitana ny kernel Linux kinova 5.8 miaraka amin'izany ny tombony rehetra ato amin'ity kinova ity dia tafiditra ao amin'ny fizarana ary fonosana marobe koa no nohavaozina.
Saingy amin'ireo fanavaozana izay misongadina indrindra dia hitantsika fa miorina amin'ny Xfce 4.14, izay miaraka amin'ny lohahevitra "Matcha" ary mivelatra amin'ny ny rafitra «Display-Profiles», izay ahafahanao mitahiry mombamomba miavaka miaraka amin'ny fisehon'ny fampisehoana.
Mandritra ny fanontana miorina amin'ny en KDE dia manolotra kinova vaovao amin'ny birao Plasma 5.19. Ahitana andiana t fenoemas of Breath2, ao anatin'izany ny kinova maivana sy maizina, screensaver animated, Mombamomba an'i Konsole sy hoditra Yakuake.
Raha tokony ho ny menio nentim-paharazana an'ny fampiharana Kickoff-Launcher dia atolotra ny fonosana Plasma-Simplemenu. Ny rindranasa KDE dia nohavaozina amin'ny kinova KDE-Apps tamin'ny 20 Aogositra 2008.
Ho an'ny anjarany, amin'ny fanontana miorina amin'ny Mitohy ny fandefasana GNOME miaraka amin'ny GNOME 3.36. Ny interface interface amin'ny efijery sy fanidiana nohatsaraina ary koa ny rindranasa hitantanana plugins ho an'ny GNOME Shell.
Ny fomba "Aza manahirana" dia nampiharina, izay manakana vetivety ny fampisehoana fampandrenesana. Ny akorany default dia zsh. Mpampirantiana fampisehoana GDM nohavaozina sy fampiharana fampiharana birao (miova eo amin'ny lohahevitra Manjaro, Vanilla GNOME, Mate / GNOME2, Windows, macOS ary Unity / Ubuntu).
Pamac Batch Manager dia nohavaozina ho amin'ny version 9.5 miaraka amina asa fitadiavana fiankinan-doha haingana kokoa, fikirakirana hadisoana tsara kokoa ary fampiharana tsara kokoa amin'ny fikarohana.
Plus ny fametahana fonosana AUR ary fametrahana fametrahana iray-pass dia nomena. Ny fananganana Architect console dia manome ny fahaizana mametraka amin'ny fizarazaran'i ZFS.
farany raha liana hahafantatra bebe kokoa momba izany ianao Momba ny famoahana ity fanavaozana ity dia azonao atao ny manamarina ny antsipirian'ny lahatsoratra voalohany amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity.
Sintomy ny Manjaro Linux 20.1
Ary farany ho an'ireo izay liana amin'ny fahazoana ny kinova Manjaro vaovao, azon'izy ireo ny maka ny sarin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny fandehanana mankany amin'ny tranonkala ofisialy amin'ny fizarana sy ao amin'ny fizarana fampidinana azy dia azonao atao ny mahita ireo rohy hampidinana ireo tsiro rehetra tianao na ireo kinovan'ny fiarahamonina izay manampy tontolo birao na mpitantana varavarankely.
Manjaro dia tonga amin'ny kinova mivantana miaraka amin'ny tontolon'ny sary kitra KDE (2.9 GB), GNOME (2.6 GB) ary Xfce (2.6 GB). Ny fananganana miaraka amin'i Budgie, Kanelina, Deepin, LXDE, LXQt, MATE, ary i3 dia novolavolaina niaraka tamin'ny fandraisan'anjaran'ny fiaraha-monina.
Ny sary dia azo soratana amin'ny:
Windows: Afaka mampiasa Etcher, Universal USB Installer na LinuxLive USB Creator izy ireo, samy mora ampiasaina avokoa.
Linux: Ny safidy naroso dia ny fampiasana ny baiko dd, izay amaritana izay lalana ananantsika ny sary Manjaro ary koa ny toerana misy ny tendrombohitra misy antsika ny usb:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Manjaro Linux 20.1 tonga miaraka amin'i Kernel 5.8, fanavaozana ny tontolo iainana ary maro hafa
Mba hamonjy ny sary dia mampiasa Etcher aho, azo alaina ihany koa amin'ny rafitra GNU / Linux ary tena mora ampiasaina.
Blurtooth fahalemen'ny BT izay mamela ireo mpijirika hifandray amin'ireo fitaovana eo akaiky eo
Tsy ny Linux ihany, fa Apple sy Microsoft dia naneho fahalianana amin'ny Rust.